သူ့ကို ချစ်ခဲ့မိတဲ့အတွက် နောင်တရလားလို့မေးရင် – Shinyoon
သူ့ကို ချစ်ခဲ့မိတဲ့အတွက် နောင်တရလားလို့မေးရင် ကျွန်မနောင်တမရဘူးလို့ပဲ ဖြေမယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကို မချစ်မှန်းသိသိနဲ့ ဆက်ချစ်ဖို့ရွေးခဲ့မိတာကိုတော့ နောင်တရပါတယ် . လက်လွတ်လိုက်ရင် သူကောကိုယ်ကော လွတ်လပ်သွားမယ်ဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ ကျွန်မ သတ္တိတွေမရှိခဲ့တာလေ …
ပျော်ခဲ့ဖူးတယ် .. သူနဲ့တွေ့မှ အချစ်ဆိုတာကို ခံစားသိရှိခဲ့ဖူးတယ် အဲ့ဒီအတွက်တော့ တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့်တကယ်မချစ်ပါပဲ ဟန်ဆောင်ချစ်ခဲ့တာတွေအတွက်တော့ ကျွန်မ သိပ်ပြီးခွင့်မလွှတ်ချင်ခဲ့ဘူး သူပဲ ချစ်တတ်အောင် သင်ပေးခဲ့ပြီး သူပဲ ချစ်တတ်တဲ့နှလုံးကို အသေသတ်သွားခဲ့တာပါ …
အဲ့ဒီတုန်းက ကိုယ်က ဒီတစ်ယောက်ကို ချစ်တယ်ဆိုရင် ချစ်လိုက်ဖို့ပဲ တွေးတယ် … နာတယ် သာတယ်ဆိုတာတွေ မတွက်ပဲ သူပျော်နေရုံနဲ့ ကိုယ်ပြုံးနေနိုင်တဲ့အထိကို ချစ်တာလေ … မျက်နှာလေးညှိုးသွားတာကအစ သူပစ်ထားတာအဆုံး ကျွန်မ ချစ်နေမိတာ …
သူကြောင့် ကိုယ်ပြုံးခဲ့ရတာတွေထက် သူ့ကြောင့် ကိုယ်ငိုခဲ့တဲ့ရက်တွေများခဲ့တာတောင် သူပျော်စေခဲ့တဲ့ရက်တွေကိုပဲ မှတ်ထားတတ်တဲ့ကောင်မလေးပေါ့ … သိပ်ပြီး အမှတ်မထားတတ်ဘူး သူ့ကို ချစ်ခဲ့မိတာတွေအတွက်ကော နောင်တရလားတဲ့ မေးကြတယ် သူ့ကို ချစ်ခဲ့မိတာတွေအတွက်တောင် နောင်တတွေမရခဲ့ပါဘူး
သူ ကျွန်မကို မချစ်တော့မှန်းသိသိရဲ့နဲ့ ဆက်ပြီး ကပ်တွယ်ချင်နေခဲ့တာတွေအတွက်တော့ နောင်တတွေရခဲ့မိသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အခုချိန်ထိ အပြစ်တွေတင်နေမိတယ် ….
သူ့ကို ခ်စ္ခဲ့မိတဲ့အတြက္ ေနာင္တရလားလုိ ့ေမးရင္ ကြ်န္မေနာင္တမရဘူးလို့ပဲ ေျဖမယ္ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ကို မခ်စ္မွန္းသိသိနဲ႕ ဆက္ခ်စ္ဖို့ေရြးခဲ့မိတာကိုေတာ့ ေနာင္တရပါတယ္ .လက္လြတ္လိုက္ရင္ သူေကာကိုယ္ေကာ လြတ္လပ္သြားမယ္ဆိုတာ သိသိၾကီးနဲ႕ ကြ်န္မ သတၱိေတြမရွိခဲ့တာေလ …
ေပ်ာ္ခဲ့ဖူးတယ္ .. သူနဲ႕ေတြ႕မွ အခ်စ္ဆိုတာကို ခံစားသိရွိခဲ့ဖူးတယ္ အဲ့ဒီအတြက္ေတာ့ တကယ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ .. ဒါေပမယ္ ့တကယ္မခ်စ္ပါပဲ ဟန္ေဆာင္ခ်စ္ခဲ့တာေတြအတြက္ေတာ့ ကြ်န္မ သိပ္ျပီးခြင့္မလႊတ္ခ်င္ခဲ့ဘူး သူပဲ ခ်စ္တတ္ေအာင္ သင္ေပးခဲ့ျပီး သူပဲ ခ်စ္တတ္တဲ့ႏွလံုးကို အေသသတ္သြားခဲ့တာပါ …
အဲ့ဒီတုန္းက ကိုယ္က ဒီတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္္တယ္ဆိုရင္ ခ်စ္လုိက္ဖို့ပဲ ေတြးတယ္ … နာတယ္ သာတယ္ဆိုတာေတြ မတြက္ပဲ သူေပ်ာ္ေနရံုနဲ႕ ကိုယ္ျပံဳးေနနိုင္တဲ့အထိကို ခ်စ္တာေလ … မ်က္နွာေလးညွိဳးသြားတာကအစ သူပစ္ထားတာအဆံုး ကြ်န္မ ခ်စ္ေနမိတာ …
သူေၾကာင့္ ကိုယ္ျပံဳးခဲ့ရတာေတြထက္ သူ့ေၾကာင့္ ကိုယ္ငိုခဲ့တဲ့ရက္္ေတြမ်ားခဲ့တာေတာင္ သူေပ်ာ္ေစခဲ့တဲ့ရက္ေတြကိုပဲ မွတ္ထားတတ္တဲ့ေကာင္မေလးေပါ့ … သိပ္ျပီး အမွတ္မထားတတ္ဘူး သူ့ကို ခ်စ္ခဲ့မိတာေတြအတြက္ေကာ ေနာင္တရလားတဲ့ ေမးၾကတယ္ သူ့ကို ခ်စ္ခဲ့မိတာေတြအတြက္ေတာင္ ေနာင္တေတြမရခဲ့ပါဘူး
သူ ကြ်န္မကို မခ်စ္ေတာ့မွန္းသိသိရဲ႕နဲ႕ ဆက္ျပီး ကပ္တြယ္ခ်င္ေနခဲ့တာေတြအတြက္ေတာ့ ေနာင္တေတြရခဲ့မိသလုိ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အခုခ်ိန္ထိ အျပစ္ေတြတင္ေနမိတယ္ ….
ကိုယ်ဆွဲထားမှ မြဲမယ့်လက်ဆိုရင်တော့ ….